Manjaro 21.0.6 Inouya ne KDE Gear 21.04.1 uye Inosanganisira Cutefish DE | Linux Vakapindwa muropa
Manjaro 21.0.6 inosvika ne KDE Gear 21.04.1 uye inosanganisira Cutefish DE, asi GNOME 40 haisati yaonekwa
Nezuro, isu vedu vanoshandisa iyi inozivikanwa kugovera kubva paArch Linux taigona kuona kuti Pamac akazadzwa sei nemapakeji matsva ekugadzirisa. Izvi zvinoreva kuti nyowani yakagadzikana vhezheni yanga yatovepo, asi izvi zvinosvika pakutanga pane zvimiro zviripo pane chimiro chemifananidzo mitsva yeIO. Nguva pfupi yapfuura, chirongwa chakazivisa kuvhurwa kwe Manjaro 21.0.6, iyo isiri iyo nhau dzakanakisa pasirese kune vashandisi veGNOME nekuti izvo zvinoreva kuti vachatofanira kumirira kwenguva yakareba kuti vashandise yazvino vhezheni yeShell.
Uye ndiyo iyo Manjaro ichatanga kushandisa GNOME 40 kubva v21.1 yeiyo inoshanda sisitimu, uye ndizvo zvimwe zvichave zvakamirirwa semvura yaMay uye izvo zvisati zvasvika. Ivo vedu avo vakabuda mushe zvakare zvakare vashandisi veKDE, nekuti izvo zvinoshandiswa zveepurojekiti zvakagadziridzwa KDE Gear 21.04.1. Uye ivo vakawedzerawo nyowani Cutefish desktop mapakeji anoyeuchidza nezve JingOS.
Pfungwa dzeManjaro 21.0.6 Ornara
Sezvakataurwa zuro pavakazivisa kuvhurwa kweshanduro itsva yakagadzika, nhau dzakatanhamara ndedzinotevera
Iyo mhodzi yakagadziridzwa, yakanyanya kukwiridzira iri Linux 5.12.8.
Iyo NVIDIA mutyairi yakagadziridzwa kuita vhezheni 465.31.
Cutefish DE (CDE) yakawedzerwa.
Kodi Addons (Kodi-Addons) akagadziridzwa.
MaharaOffice 7.0.6. Iyo yakanyanya-ku-date vhezheni inowanikwawo pane "Nyowani" chiteshi.
Mesa yakagadziridzwa kuva v21.1.2.
KDE Gear 21.04.1 mune iyo KDE edition.
Mazhinji KDE-git mapakeji akagadziridzwa uye / kana kubviswa kubva munzvimbo dzemunharaunda.
Zvimwe zvinogadziridzwa kune ayo azvino vhezheni anosanganisira Python naHaskell.
Manjaro 21.0.6 Ornara zviri pamutemo yeakange aripo mashandisirwo emaminetsi ari pasi pe24 chete, uye iyo nyowani XFCE, GNOME uye KDE mifananidzo ikozvino inogona kutorwa pasi kubva kune zvinongedzo zvakapihwa mu kusunungura chinyorwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Manjaro 21.0.6 inosvika ne KDE Gear 21.04.1 uye inosanganisira Cutefish DE, asi GNOME 40 haisati yaonekwa
GCC yagadzira yekuvandudza kune yayo copyright kupihwa mutemo
New Relic yakabatanidza Pixie kuenda Kubernetes kugadzirisa kuvonekwa kweichi